Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment किन मानिस निद्रामा बर्बराउछ ? यस्ता छन् कारण र बच्ने उपाय - Pnpkhabar.com
किन मानिस निद्रामा बर्बराउछ ? यस्ता छन् कारण र बच्ने उपाय
एजेन्सी : केहि मानिसहरु निद्रामा बर्बराउने गर्छन। दिनमा भएका क्रियाकलापहरुलाई राती निन्द्रामा सुनाउने वा बोल्ने बानीलाई चिकित्सकीय भाषामा भने यसलाई ‘प्यारासोमनिया’ भनिन्छ । जसको अर्थ हो, निद्रामा अस्वभाविक व्यवहार गर्नु ।
र यस प्रकारको व्यवहारलाई न त रोगमा लिइन्छ न त सामान्य समस्या नै । किनकी निद्रामा बरबराउने मानिस एक पटकमा तीस सेकेन्ड भन्दा बढी समय बोल्दा पनि बोल्दैनन् ।
आखिर मानिसहरु निद्रामा किन बरबराउने गर्छन् ? यस्तो छ कारण ? कस्ता व्यक्ति निद्रामा बरबराउने गर्छन् ?
एक शोधले जनाए अनुसार तीन देखि दश वर्षको आधा भन्दा बढी बालबालिका आफ्नो कुरा निद्रामै राख्ने गर्छन् । र , निद्रामै कुरा पूरा गर्छन् । जबकी पाँच प्रतिशत ठूला व्यक्तिमात्र निद्रामा बरबराउने गर्छन् । यो समस्या कहिलेकाही वा नियमित रुपमा पनि हुनसक्छ भने पुरुषको तुलनामा महिलाहरु निद्रामा धेरै बरबराउने गर्छन् ।
तनावका कारण पनि बरबराउँछन्
तनावका कारण पनि मानिसहरु निद्रामै बरबराउने गर्छन् । त्यसैले, यो समस्या कम गर्न पनि मस्तिष्कलाई तनावबाट मुक्त राख्न जरुरी छ ।
आरईएम स्लीप विहेवियर डिसअर्डर
सुतेको समयमा बोल्ने, कराउने वा हात खुट्टा चलाउने डिमेन्सिया वा पार्किन्सन्स जस्ता रोगको लक्षण हुने गर्छ । यस्ता रोगलाई ‘आरईएम स्लीप विहेवियर डिसअर्डर’ पनि भन्ने गरिन्छ । आरईएम निद्राको त्यो चरण हो जसमा निद्रा वा सपनामा देखेको कुरा हामीलाई साचो लाग्ने गर्छ । र, हामी त्यसप्रति प्रतिकि्रया दिन थाल्छौ । यसबाहेक, विभिन्न औषधीको दुष्प्रभाव, तनाव, मानसिक समस्याका कारण पनि मानिसहरु निद्रामै बरबराउन थाल्छन् ।
कसरी पाउने छुटकारा ?
समयमै सुतेर, व्यायाम गरेर तथा मनोपरामर्शदाताको सहयोग लिएर पनि यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
विशेषगरी, समयमै सुत्ने र समयमै उठ्ने बानी गरेमा शरीरलाई आराम मिल्छ, जसले गर्दा यो समस्याबाट सजिलै छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै, व्यायाम गरेर पनि यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । किनकी कयौ पटक शरीरमा रक्तसञ्चार राम्ररी नभएमा पनि मानिसहरु निद्रामै बरबराउने गर्छन् । त्यसैले, यो समस्याबाट छुटकारा पाउन तथा मन, मस्तिष्क र शरीरलाई स्वस्थ राख्न योगा तथा व्यायाम गर्न सल्लाह दिइने गरिन्छ ।
यसबाहेक, दिमागलाई स्थिर राख्न संगीत सुन्नका लागि पनि सुझाव दिइने गरिन्छ । संगीतले मन प्रफुल्लित राख्नुका साथै मस्तिष्कलाई स्थिर राख्दछ । साथै, संगीतले निद्रा पनि जगाउँछ । जसले गर्दा निद्रामा बरबराउने समस्या पनि क्रमिक रुपमा कम हुन थाल्दछ ।
यसका बाबजुद पनि यो समस्या कम नभएमा भने साइकोथेरापिस्टको परार्मश लिनु पर्दछ । र, उनीहरुको राय तथा सुझाव अनुसार नै यो समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ ।
वायु प्रदूषण र स्वास्थ्यमा असर : क्षेत्रीय कार्यशाला
पत्थरीबाट जोगिन दैनिक सेवन गर्नुहोस् अमला
गर्मीमा यसरी जोगाउनुहोस् आँखा